प्रचण्ड र झलनाथले जवाफ मागेपछि बैठक छोडेर निस्किए प्रधानमन्त्री ओली -
प्रचण्ड र झलनाथले जवाफ मागेपछि बैठक छोडेर निस्किए प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठक सदस्यहरुले माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक भएपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दिल्लीबाट सुरु भएको बताएका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले नेताहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई सरकार ढाल्न दुतावास सक्रिय भएको भन्ने वास्तविकता के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले यसबारे प्रधानमन्त्री स्थायी कमिटी बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए ।
उनीहरुले सरकार ढाल्ने कुरा चानचुने नभएको भन्दै यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन विदेशी दूतावास र नेपालकै नेताले पनि चलखेल गरेको भन्ने आरोपको आधार के हो ?
सरकार ढाल्ने कुरा ख्याल ठट्टाको विषय हो ? यसमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुपर्छ’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । बैठकमा प्रचण्ड, खनालले जवाफ मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली भने बैठक छाडेर निस्किएका छन् ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार ३१ गते बुधबारको रा’शिफल !
म घमण्डलाई २–४ स्टेप पर नै राख्छुः निशान भट्टराई [भिडियो सहित]
स्वीस बैंकमा प्रधानमन्त्री ओलीको ५५ लाख डलर, ५ लाख अमेरिकी डलर वर्षेनी थपिँदै
गगन थापा भन्छन : यदि ‘म प्रधानमन्त्री भए युवालाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था…